Chefuru iPad ihuenyo mkpọchi Paswọdu - Olee otú naghachi Data na ya
Chefuru m iPad ihuenyo mkpọchi paswọọdụ!
iPad apụghị-unlocked mgbe kpochidoro, mụ na nwa ihuenyo !! Dị ụzọ ọ bụla na m nwere ike idozi nke a chefuru paswọọdụ na iPad na Ị kpọghee ekwt ya? Achọrọ m iji zọpụta ya na achọghị hapụ ihe ọ bụla data na ya. Biko nyere! Enyemaka gị ga-nnọọ uru!
Nanị ụzọ Ị kpọghee ekwt gị iPad na a mkpọchi paswọọdụ, ndị ọzọ karịa abanye passcode, bụ iweghachi gị iPad na mbụ ụlọ ọrụ ntọala. Otú ọ dị, data na gị iPad ga-ehichapu ma ọ bụrụ na ị na-eme mmepụta ihe mwube weghachi. Ya mere, ị ga-mma ndabere gị iPad data akpa mgbe ị na-eme atụmatụ ime ya.
Olee otú ị pụrụ naghachi ma ọ bụ ndabere gị iPad data? Gbalịa Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (Mac) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (N'ihi na Windows ọrụ)? Ma nke ha ekwe ka ị selectively naghachi gị iPad data na-azọpụta ha na kọmputa gị. Ọzọkwa, ha pụrụ inyere gị aka ịhụ gị na mbụ furu efu data. Dị ka ụwa mbụ iOS data mgbake software, Ma nsụgharị nke Wondershare Dr.Fone maka iOS-kpam kpam nchebe na pụrụ ịdabere na.
Naghachi / ndabere data na gị ekpochi iPad
Download free ikpe version nke usoro ihe omume n'okpuru nwere a-agbalị.
Rịba ama: The windows version akwado ndị ọhụrụ Windows 10, na Mac otu na-akwado Mavericks.
Nzọụkwụ 1. Gbaa usoro ihe omume na kọmputa gị
Ebe a, ka na-na Windows version dị ka ihe atụ. Mgbe ị jikọọ gị iPad na kọmputa, ị ga-ahụ na windo n'okpuru.
Nzọụkwụ 2. iṅomi gị ekpochi iPad maka data na ya
Jide ngwaọrụ gị, na enweta na "Malite" bọtịnụ.
Jide Ike na Home buttons n'otu oge mgbe ị pịa "Malite" button maka kpọmkwem 10 sekọnd.
Hapụ Ike button mgbe 10 sekọnd agafeela, ma na-ejide Home bọtịnụ maka anther 15 sekọnd.
Mgbe ị na-gwara na ị na-aga nke ọma banyere usoro, ị nwere ike hapụ Home button na-amalite ịgụ isiokwu gị iPad 1.
N'ihi na ndị ọzọ iPad ọrụ dị ka iPad Obere, iPad na Retina Ngosipụta, wdg, ozugbo pịa "Malite iṅomi" bọtịnụ iṅomi gị iPad niile data na ya.
Nzọụkwụ 3. Preview & ịzọpụta iPad data na kọmputa gị
Mgbe Doppler, ị nwere ike ihuchalu dum data na gị iPad. Akara ndị ị chọrọ na pịa "Naghachi" na-azọpụta ha na kọmputa gị.
Otú ndozi a forgeten paswọọdụ nke on iPad (Ị kpọghee ekwt iPad paswọọdụ)
Mgbe naghachi data na gị ekpochi iPad, ọ bụ oge Ị kpọghee ekwt gị iPad ugbu a. Apple si ukara ntuziaka ka weghachi iPad bụ:
Jikọọ iPad gị na kọmputa.
Họrọ iPad na iTunes sidebar, na pịa "Summary" taabụ.
Pịa "Lelee maka Update." ITunes na-agwa gị ma ọ bụrụ na e nwere ihe a ọhụrụ version nke iPad software dị.
Pịa "Weghachi". Soro ntuziaka na ihuenyo mezue eweghachite. N'oge usoro, ọ ga-akwado gị ka ndabere gị iPad. Mgbe iPad software e weghachiri eweghachi, ị nwere ike họrọ melite iPad dị ka a ọhụrụ iPad, ma ọ bụ weghachi gị videos, music, ngwa data, na ndị ọzọ na ọdịnaya si a ndabere.
Cheta na: Ọbụna ị mee ka gị iPad ka Apple ọrụ center, Apple mkpara nwekwara mkpa iji weghachi gị iPad Ị kpọghee ekwt ya. Nke ahụ bụ na-ekwu, i kwesịrị ihichapu ihe niile na ya.
> Resource> iPhone> [chezọrọ iPad ihuenyo mkpọchi Paswọdu] Olee otú naghachi Data na ya